Shina: Nitoraka tamin’ny kiraro ny mpianatra iray hiarovana ny fahafahana maneho hevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2012 11:48 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, አማርኛ, Español, Français, English
Tamin'ny 7 oktobra 2012 lasa teo dia notorahan'ny mpianatra iray avy ao amin'ny oniversite Hainan tamin'ny kiraro ny mpitantara maoista iray antsoina hoe Sima Nan, nanoherany ny tsy fahafahana maneho hevitra any Shina. Talohan'ny nitorahany tamin'ny kirarony dia hoy izy : “na dia ratsy aza ny kabary ataonareo eo, dia afaka mody any amin'ny hôtelinao foana ianao. Fa raha tsy mitovy hevitra amin'izay ambaranao eo aho, dia azoko antoka fa hidiana any amin'ny efitrano kely maizina aho.”
Nanao izany fihetsika izany ity mpianatra ity nandritra ny fotoana fanontaniana sy valiny. Indro ny sary mihetsika mampiseho ny zava-nitranga miaraka amin'ny fanehoan-kevitr'ilay mpianatra:
Voalohany, miarahaba sy misaotra an'Andriamatoa Nan ny tenako tonga soa eto amin'ny oniversiten'ny Hainan. Mpianatra ato aho. Te hilaza zavatra vitsivitsy aho. Voalohany, efa namaky ny momba an'i Socrates aho, izay nilaza fa tsy mahafantatra na inona na inona afa-tsy ny tsy fahafantarany na inona na inona. Faharoa, ilaiko ny fahafahana sy ny demokrasia hiarovana ny fahafahana. Fahatelo, tsy maintsy ambarako fa ny kabarinao manohitra ny demokrasia dia maneritery ny fahafahako. Tsy haintsika akory ny mampiasa ny fahafahantsika maneho hevitra. Ny zavatra efatra nambaranao teo dia tsy azoko toherina noho ny maha politika azy. Na dia tsy mahaliana aza ny nambaranao teo, afaka miverina mankany amin'ny hôtelinao ianao. Fa raha manohitra izay voalazanao teo kosa aho, dia azoko antoka fa hidiana ao na'anaty efitra maizina aho. Aoka mba tsy hotapahana azafady. Azonao atao tsara ny tsy manapaka izay lazaiko eto. Izao no fanontaniako, azoko atao ve ny mitoraka anao amin'ny kiraro? Satria voantohintohina ny fahafahako eto amin'ity firenena ity, dia te hiaro izany fahafahako izany aho”.
Mpianatra iray hafa mitantara ny zava-nisy [zh] ao amin'ny bilaoginy:
Nanomboka tamin'ny 7 ora sy sasany ny famelabelarana. Vao nanomboka dia nankasitraka ny filohan'ny oniversite Li Jianbao i Sima Nan, tena hainy tsara ny nandokadoka azy. Nahazo isa tsara tampoka teo ny filohan'ny oniversite. Avy eo dia ohatry ny olona misokatra tsara amin'ny ady hevitra ireny ny fiteniny ary nambarany fa afaka mitoraka zavatra azy ny olona tsy mitovy hevitra aminy ary asainy hitoraka azy mihitsy. Ary satria mbola tsy nanomboka ny kabariny izy dia tsy mbola nisy olona vonona ny hitoraka azy.
Avy eo dia nilokaloka izy fa hilaza zavatra efatra ary hisy ny fotoana lava hahafahana mifanakalo hevitra. Tena ninoako ny zavatra nolazainy. Lava be ny kabary nataony, nandreraka sady be diso be. Ireto ny zavatra efatra nolazainy : 1. Eo ambany fifehezan'ny antoko dia misy ny olana ara-tsosialy betsaka, 2. Nahavita zavatra betsaka ny mpitarika ny antoko, 3. Raha tsy nisy ny antoko dia efa nikorontana ny fiaraha-monina, 4. Tsy azo sarahana amin'ny antoko ny demokrasia an'ny vahoaka… Nisy olona saika hisitra tao amin'ily efitrano teo anelanelan'ny kabariny fa nosakanan'ny mpitandro ny filaminana. Tsy nampoizina ny zana-nitranga avy eo. Afa-po tamin'ny kabariny i Sima Nan afaka adin'ny iray sy sasany. Nanomboka amin'izay ny fametrahana fanontaniana sy fanomezana valiny. Nifanatrika tamiko ny lehilahy iray nanao akanjo ambony vonimboasary ary niteny izy. Nitonona anarana filôzôfa grika iray izy, hadinoko ny antsipiriany satria efa te handre mafy izay tohiny aho. Mikasika ny fahafahana sy ny fitoviana no vontoatin'ny zavatra nambarany. Hoy izy : ankehitriny dia tsy mitovy ny fahafahantsika maneho hevitra. Tsy manana fahafahana aho. “Ny zavatra rehetra nambaranao teo dia marina ara-politika. Rehefa vita ny kabarinao dia mody any amin'ny hôtelinao ianao. Fa raha tsy mitovy hevitra amin'izay nambaranao aho dia azoko antoka fa hidiana ao an'efitrano maizina”. (Izay ihany no zavatra tena tadidiko fa azafady). avy eo dia nilaza i Sima Nan fa tsy fanontaniana izany resaka izany. Dia namaly ilay mpianatra hoe, “izao ary no fanontaniako, afaka mitoraka amin'ny kiraroko ve aho?” Ary tonga dia natorany tery aloha ny kirarony. Nitehaka aho ary tsy niraharaha ny zavatra mety hahazo ahy…
Maoista i Sima Nan ary taona vitsy lasa izay dia noraisiny ho modely ho an'i Shina i Korea Avaratra eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny any ivelany. Nanao kabary betsaka koa izy nankahalany ny antoko liberaly, ary nosoketainy mihitsy ireto farany ho mpamadika tanindrazana.
Marobe no nidera ny fahasahin'ilay mpianatra, kanefa natahotra ny mety hahazo azy koa ny sasany. Indreto ny santionany amin'ny ady hevitra notsongaiko tao amin'ny internety[zh]:
慕容雪村: Milaza ny tenany ho manam-pahaizana sy mpitondra ny foto-kevitra maoista i Sima Nan. Adinony angamba ny fampijaliana sy ny famoretana ireo manam-pahaizana nandritra ny fitondran'i Mao – noterana nanao satroka be izy ireo ary nasaina nihazakazaka teny amin'ny arabe, nokapohina tamin'ny fehikibo, nanao asa an-terivozona tany amin'ny toeram-pambolena ary noterena hiaiky ny fahadisoany. Zhang Zhixin notapahana ny tendany, Wang Shiwei nalevina tao anaty lava-drano rehefa avy novonoina an-tsokosoko. Lao She sy Fu Lei namono tena… Toraka kiraro no valisoa azony.
古月照兰芳: Tsy tianao ny kabarin'i Sima Nan, mitoraka kiraro ianao; tsy tiako ny kabarin'i He Weifong, hitoraka amin'ny atody aho; Tsy tianao ny kabarin'i Kong Qingdong, hitoraka amin'ny fotaka ianao; tsy tiako ny kabarin'i Zhao Qulai, hitoraka vato aho; tsy tianao ny kabarin'i Zhang Hongliang, hitoraka gazy ianao; tsy tiako ny kabarin'i Lao Yung hitoraka baomba aho; tsy tianao ny kabarin'i Han Deqiang, hitoraka amin'ny baomba nokleary ianao — mampihatra demokrasia ve isika raha mifampitoraka?
吴钩1975: Marobe ireo miady hevitra an’ interinety momba ny nataon'ilay mpianatra. Ny sasany mitehaka, ny hafa manakiana ilay mpianatra ho manohintohina ny zon'ny hafa. Tokony hisy marimaritra iraisana amin'ny fahazoantsika ilay hoe “mitoraka amin'ny kiraro”. Tsy ekeko kosa raha hoe fihantsiana ny “fitorahana amin'ny kiraro”. Fihetsika hampisehoana tsy fankasitrahana fotsiny izany satria mitongilana ny fanjakana. Zavatra fahita matetika amin'ny firenena tandrefana izany hoe olona mitoraka atody ny solontenam-panjakana izany. Fa tsy faka tahaka akory izany.
十年砍柴: Tsy azo atao ny mampirisika ny mpianatra. Any amin'ny firenena tandrefana mantsy, zavatra fahita matetika ny mitoraka atody na kiraro hanehoana tsy fankasitrahana ary tsara ny vokatr'izay. Fa aty Shina, tena mampatahotra ny vokany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy manana fahefana hanasazy ilay mpianatra i Sima Nan. Fa raha sanatria kosa ka misy mpianatra mafana fo hitoraka kiraro amin'ny manam-pahefana dia ho zava-doza ny vokany.